ဘယ်လိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအစစ်အမှန်ဘဝလိင်မှ desensitised ယောက်ျား၏မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာအင်ဒရူး Smiler, ဒေါက်တာ Angela ဂရက်ဂိုရီ (2016) - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
ဘယ်လိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအစစ်အမှန်ဘဝလိင်မှ desensitised ယောက်ျား၏မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာအင်ဒရူး Smiler, ဒေါက်တာ Angela ဂရက်ဂိုရီ (2016)
porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု ပို. ပို. ကျယ်ပြန့်လာ
တစ်ဦးကပုလ်ကျွမ်းကျင်သူသူမိုးသည်းထန်စွာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းပါသည်စိုက်ထူပြဿနာများနှင့်အတူ 10 လူပျိုတို့အတွက်တဦးတည်းမှတက်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြပေမည်ကြောက်ရွံ့ကပြောပါတယ်။ ဒေါက်တာအင်ဒရူး Smiler အဆုံးမဲ့ streaming များညစ်ညမ်းရန်လွယ်ကူ access ကိုလိင်ပြဿနာနှင့်အတူကျန်းမာလုလင်တို့သည်ထွက်ခွာကြောင်းပြောခဲ့သည်။ သူကပြောပြသည် အဆိုပါလွတ်လပ်သော"ငါမြင်နေရတဲ့ယောက်ျားတွေ, သူတို့ထဲကအများစုဟာ 13 နှင့် 25 အကြားရှိပါတယ်။ အများစုသည်, အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဘို့, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးပုံဖြစ်ပါသည်။
"ငါသည် 15 မိနစ်တစ်နေ့တစ်ကြိမ် porn မှ masturbating တယ်ဒါပေမယ့်ငါငါးနှစ်ကြောင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျင့်ကိုကျင့်လျှင်ဒီတော့ငါ porn ဖို့အော်ဂဇင်ရှိခြင်းမှကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းငါ့လမ်းအပေါ်တော်တော်ကောင်းကောင်းမိပါတယ်။ "
သူသည်အများသောမိုးသည်းထန်စွာအသုံးပြုသူများသည်ငယ်ရွယ်ကြောင့်, ထိုအလေ့အထသည် ပို. ပင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများဖြစ်လာကြောင်းသတိပေးခဲ့သည်။
ငါ 17 ရယ်နဲ့ငါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ orgasm အတှေ့အကွုံ 90% သည်ဆိုပါက "ထို့နောက်ငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကြောင့်အထူးသဖြင့်အမျိုးမျိုး / အရသာသို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေအများကြီးထားပါဘူးဒါပေမဲ့ငါကိုအခြားသူတစ်ဦးနဲ့ငါ့လိင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲအနည်းငယ်သာအချိန်အတွက်ထားပြီးပြီ ဒါကြောင့်ဖြစ်လာဖို့ကပိုပြီးစိန်ခေါ်မှုစေသည်အခြားသူတစ်ဦးမှနှိုးဆော်ခြင်းများနှင့်သင်မကြာခဏပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောဤသည်အခြားဦးတည်ချက်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာပါ။ "
တစ်ဦးက 2014 လေ့လာမှု ယောက်ျားသုံးပုံတစ်ပုံသည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုနေကြကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းစမတ်ဖုန်းများနှင့်အလွန်မြန်ဆန်သောဒေတာဆက်သွယ်မှုများပေါ်ပေါက်လာခြင်းကြောင့်ညစ်ညမ်းမှုသုံးစွဲမှုသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတိုးပွားလာခဲ့သည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။
ဒေါက်တာ Angela ဂရက်ဂိုရီ, ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham တက္ကသိုလ်ဆေးရုံမှာ psychosexual ကုထုံးက "အမျိုးသားများဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်နှင့်အတူပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွခြင်းနှင့် arousal မှ desensitised နှစ်ဦးစလုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လာနေကြတယ်။ "
အခြို့သောသူတို့သညျအဘို့, သို့သော်သူတို့ hypersexuality ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ်နှိုးဆော်ခြင်းနေကြသည်။ "ဒါဟာသူတို့ခြစ်ရာမနိုင်ထားတဲ့ဗောက်နဲ့တူရဲ့နဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်အပေါ်အစဉ်အမြဲဖြစ်တယ်," ဟုဒေါက်တာဂရက်ဂိုရီကပြောပါတယ်။
ကျောင်းသားများ Bristol က uni မှာအတူတူ porn စောင့်ကြည့်
porn-စားသုံးမှု၏ပျံ့နှံ့နေသော်လည်းသေး၏အဖြစ် "porn စွဲ" မတာဝန်ရှိသူတဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကိုဒီတော့ဒေါက်တာ Smiler ၏စာရေးဆရာလည်းမရှိ ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်လိင်: အ 21st ရာစုဆယ်ကျော်သက် Boy များအတွက်လမ်းညွှန်, ဟူသောဝေါဟာရကိုသုံးစွဲဖို့မကြိုက်ဘူး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူဂရက်ဂိုရီကလူအချို့ကိုယုံကြည်သည် do porn ရန်အလွန်မှန်ကန်စှဲဖွံ့ဖြိုး။
သူမသည်မကြာခဏစိုက်ထူပြဿနာများနှင့်အတူလူပျိုတို့ကိုမြင်ပေမယ့်အဲဒါကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဒါမှပုံမှန်ယူဆရဲ့အဖြစ်ကိုမကြာခဏသူတို့ porn ဖို့ link ကိုလုပ်မပေးပါဘူး။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအများဆုံးအလွယ်တကူ fixable ဖြစ်ပါသည်သင်ကကျန်းမာတဲ့ငယ်ရွယ်အထီးဆိုရင်: "သင် [တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ] ရပ်တန့်နိုင်လျှင်, သင်ပုံမှန် arousal ဖို့သင့် system reboot နိုင်ပါတယ်" ဟုဂရက်ဂိုရီကရှင်းပြသည်။
သူမသည်အအေးကြက်ဆင်ကိုရက် ၉၀ သွားရန်အကြံပေးသည်။ အချို့သောအမျိုးသားများသည်လွယ်လွယ်ကူကူတွေ့နိုင်သည်၊ ဒေါက်တာ Smiler ကသင်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ကိုပြန်လည်လေ့ကျင့်ရန်လိုကြောင်းထောက်ပြသည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်မိမိ၏ဖောက်သည်များနှင့်သူတို့နှစ်သက်သောအရာများအကြောင်းပြောဆိုသည်။
porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနေတုန်း, မှန်မှန် porn မှ masturbate သူကိုယောက်ျားတို့အတွက်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ရိုးရှင်းစွာကိုလည်းသူတို့စိတ်ဝိညာဉ်အတွက်လိင်တစ်ခုလက်တွေ့စိတ်ကူးဖန်တီးစောင့်ကြည့်။
“ ညစ်ညမ်းတဲ့နေရာမှာလိင်ကိစ္စအမြဲလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်တယ်၊ လူတိုင်းမှာအချိန်အများကြီးရှိတယ်၊ ဘယ်သူမှငြင်းပယ်တာဒါမှမဟုတ် 'ငါမလုပ်ချင်ဘူး' လို့မပြောတတ်ပါဘူး။
ဒါပေမယ့်ဒါပေမယ့်တကယ်တော့လူတွေဟာအမြဲတမ်းစိတ်အခြေအနေမျိုးမှာမဟုတ်ဘူး။ တစ်ခါတလေမင်းဘောင်းဘီကိုချွတ်လိုက်တဲ့အခါမင်းကပြုတ်ကျသွားပြီးရယ်စရာကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါကဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ယောက်ျားတွေကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သူတို့ဘာလုပ်ရမှန်းမသိအောင်မျှော်လင့်နေကြတယ်” ဟုသူကရှင်းပြသည်။
porn ကြယ်များကဲ့သို့အရှာဖွေနေမဟုတ်လူများ၏အများစု၏ပြဿနာလည်းရှိပါတယ်။ ဒီလူအများကြီးအဓိပ္ပာယ် 13-25 အသက်လုလင်တို့နှင့်အတူအဓိကအားအလုပ်လုပ်တယ်နှင့်ပုလ်အပေါ်တစ်ဦးစာအုပ်ရေးသားခဲ့သည်သူကိုဒေါက်တာ Smiler, မြင့်သောညစ်ညမ်းစားသုံးမှုယုံကြည်နေပါတယ် "ဆွဲဆောင်မှုသူသည်၏သဘောထားအမြင်များနှင့်မျှော်လင့်ချက်များပွောငျးလဲ" သူတို့ကအလွန်ကျဉ်းမြောင်းသောအရသာဖွံ့ဖြိုးရှာပါ။
ဂရက်ဂိုရီ porn ကိုပိုမို harcore ဖြစ်လာအဖြစ်, ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့နေရာအနှံ့ပိုမိုယောက်ျားရငျးနှီးပြဿနာတွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမလှူထံမှခံရလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်။
ဒါကြောင့်ယောက်ျားသည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် porn ၏လုံခြုံငွေပမာဏကိုရှိပါသလော ဒါဟာတကယ်လူတစ်ဦးအပေါ်မူတည်ပေမယ့်ဒေါက်တာ Smiler ယောက်ျားသည်တစ်ပတ်လျှင်သုံးကြိမ်မှတခါ porn မှ masturbate နိုင်ကြောင်းယုံနှင့် "ဒါကြောင့်ယောက်ျားတွေ pin ကို၏ပိုစတာမှ masturating သောအခါ 50 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထက်ကသူ့လိင်ဘဝအပေါ်မဆိုပိုပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်သွားမ မိန်းကလေးများ -up ။ "
ရာခေလသည် Hosie အားဖြင့်